PHP: Bhuku Rakanaka uye MVC Sisitimu yePHP | Martech Zone
Vanhu varipo Packt Kuburitsa vanga vaine posvo yazvino kwavakakurudzira PHP vagadziri / mabloggi kuti vaverenge bhuku nyowani uye blog nezvazvo. Ini ndinotenda chaizvo mikana yakaita seiyi - iyo haina kukumbira chero yakanaka kana yakaipa kutumira, kungoongorora kwechokwadi kwebhuku ravanopa (pasina muripo).
Bhuku randakatambira ndere CodeIgniter yeRipid PHP Chikumbiro Kuvandudza, yakanyorwa naDavid Upton.
Bhuku randinofarira paPHP / MySQL richiripo PHP uye MySQL Webhu Kuvandudza. Iyo PHP 101 uye MySQL 101 zvese zvakaputirwa mune inonakidza, yakazara bhuku nematani emakodhi sampuli. CodeIgniter inorumbidzwa zvakakwana, pamwe PHP 201 gwara. Zvinotora zvese zvakaomarara PHP zvakaoma-kukodha uye zvinopa fomati yekuvandudza kodhi nekukurumidza uye ine yakanakisa maitiro e MVV maitiro.
Model-view-controller (MVC) ndeye dhizaini yekugadzira inoshandiswa mu software engineering. Mumashandisirwo akaomarara emakomputa ayo anoratidza kuwanda kwedata kumushandisi, musimudziri anowanzoda kupatsanura dhata (modhi) uye mushandisi interface (tarisa) zvinonetsa, kuti shanduko kumushandisi interface isakanganisa kubata kwedata, uye kuti iyo data inogona kurongedzwa pasina kushandura mushandisi interface. Iyo modhi-yekuona-mutongi inogadzirisa dambudziko iri nekudzikisa kuwanikwa kwedata uye pfungwa yebhizinesi kubva pakuratidzwa kwedata uye kudyidzana kwevashandisi, nekuunza chinhu chepakati: mutongi.
Kunze kwekunyorwa-zvakanaka nematoni eiyo chaiwo-epasire mienzaniso, chimwe chezvinhu chandinofarira zvakanyanya nezvebhuku rino ndechekuti rinotsanangura izvo zvisiri. CodeIgniter imba-yakakura yakavhurika-sosi sisitimu. Saka nekudaro, ine zvimwe zvinobvumidzwa. Bhuku rinopinda mune izvi zvakadzama. Zvipingamupinyi zvakati wandei zvandakawana kwaive kushomeka kwezvinhu zvekuwanika pakuratidzira kwemashandisirwo emushandisi senge maanchor, matafura uye mafomu uye chero chirevo kune yakajeka yekare XML REST APIs uye Web Services. Nekudaro, ini ndinotenda izvo sarudzo dzinogona kuwedzerwa zviri nyore mushanduro dzeramangwana - isu tichaona!
Chikamu chakazara kwazvo cheCodeIgniter, mumaonero angu, raibhurari yedhatabhesi. Ini ndinowana kunyora MySQL kubatana uye nemibvunzo zvisingaite inopedza nguva uye inonetsa. Ini ndoda kukumbira ipapo kuCodeIgniter kuti ndishandise dhatabhesi yavo, ndinotenda ichandichengetera tani yenguva - kunyanya mukunyora / kunyora zvakare mibvunzo! Kune zvekare mamwe makuru ekuwedzera-eAjax, JChart uye Image kumonyoroka.
Kana zvikaita senge ndiri kukurukura CodeIgniter kupfuura iro bhuku, iwo maviri akanyatso kufanana. Iri bhuku inzira yakakwana yekudzidza matekiniki epamberi ekuvandudza, kwete kungoshandisa CodeIgniter zvakadaro. Ndingakurudzira zvikuru bhuku racho. Iri bhuku rinoti "Natsiridza yako PHP kukodha kugadzirwa neiyo yemahara compact yakavhurika-sosi MVC CodeIgniter fomati!". Izvi ndezvechokwadi!
Kana iwe uchifarira CodeIgniter, ive shuwa kuona iyo Yekutanga Vhidhiyo.
Tags: Lee Oddenunofanirwa kunge uri pa twitterrako bhizinesi rinofanira kunge riri pa twittertwitter yebhizinesisei uchifanira kunge uri pa twitter
Jun 20, 2011 pa 1: 39 PM
Chinangwa chehurongwa ndechekuita maitiro ekunyora web-based application zvive nyore.
Chikumbiro chakagadzirwa chakakomberedza MVC chiri nyore kubata nekuti chakakamurwa kuita mativi, ayo anotendera kuzvimiririra kusimudzira. Izvi zvinokurudzira kodhi reusability nekuvaka mamodheru, ayo anoshandiswazve mukushandisa kwese.
Jun 20, 2011 pa 1: 41 PM